Saddex Boqol (300) oo Neef, oo Talaal Lagu Sameeyey Ugu Dhinatay Gabalka Nogob. – Rasaasa News
Jijiga, June 2, 2014 – Wararka ka imanaya xarunta degaanka Somalida Ogadeeniya, ayaa sheegay in 300 oo neef oo Geel ah, ay u dhinteen talaal dhawaan lagu sameeyey.
Talaalka Geela ayaa dhawaan ka bilowday degaanada hoos taga degmada Garbo ee gabalka Nogob, halkaas oo ay Liyuu Boolisku ku talaaleen Geel badan.
Wararku waxay sheegayaan in Bakhtiga Geelu uu daadsan yahay, laagta Bawa, Ceelka Hadha iyo waliba dhulka dusha ah ee u dhaxeeya Garigo,an iyo Malayko. Wararku waxay intaas ku dareen, in la arkay dhimashada geela tiro badan labadii todobaad ee ugu dambeeyey.
Ma jiraan wax war oo ka soo baxay xafiiska beeraha, xoolaha iyo horumarinta reer miyiga oo la xidhiidha dhimashada Geela iyo wax sababay midna. Shaqaalaha xafiiskan ayaa si hoose u hadalhaya sheekada dhimashada Geela, waxaana lagu wargaliyey shaqaalaha in ayna soo hadal qaadin arimahan.
Talaalka xoolaha waxaa sameeya Ciidamada Liyuu Booliska, oo neefka Geela ee la talaalba ka qaada lacag konton bir ah (50 Birr). Lama garanayo sababta ay u talaalayaan xoolaha dad aan aqoon u lahayn dawada iyo talaalka midna.
Dhawaan ayey ahayd, kolkii ay talaal u dhinteen 1500 oo neef oo Adhi ah degmada Marsin. Maamulka ayaa dadkii adhiga lahaa u sheegay in ay ONLF sumaysay adhiga.
Warbaahinta maamulka degaanka ayaan baahin dhacdooyinka ka dhaca degaanka. ESTV waxaa laga sii daayaa arimo la xidhiidha ciyaaraha dhaqanka iyo waxqabadka maamulku sheegto.
Dagaal Ciidamada Soomaaliya iyo Liyuu Booliska.